इपीएलका स्टार: यी हुन् बढी रन बनाउने र विकेट लिने टप टेन खेलाडी – Nepal Press
इपीएलका स्टार: यी हुन् बढी रन बनाउने र विकेट लिने टप टेन खेलाडी
२०७८ असोज २४ गते २०:१९
काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) चौथो संस्करणले नयाँ च्याम्पियन पायो- चितवन टाइगर्स । बहुप्रतिक्षित ईपीएल असोज ९ देखि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरु भएर शनिबार समापन भयो ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आयोजना भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा विनोद भण्डारीको कप्ताानीमा रहेको पोखरा राइनोज र सोमपाल कामीको कप्तानीमा रहेको चितवन टाइगर्सले भेट निश्चित गरेका थिए । र, बाजी चितवनले मार्यो ।
कीर्तिपुरको मैदानले यसपालको इपीएलमा बलर र ब्याट्म्यान दुवैलाई अवसर दिएको थियो । केही ‘हाइ स्कोरिङ’ र केही ‘लो स्कोरिङ’ खेलहरु भए । अपेक्षा गरिएअनुसार ब्याटिङमा विदेशी खेलाडीहरुकै दवदवा रह्यो ।
तर, विगतमा घरेलु टि–२० फ्रेन्चाइजको तुलनामा यो पाली नेपाली ब्याट्सम्यानहरुले सुधारिएको ब्याटिङ गरे । नेपाली ब्याट्सम्यानले विदेशी ब्याट्सम्यानसँग म्याच गरेर खेलेको थियो ।
राष्ट्रिय टोलीका स्थापित ब्याट्सम्यानहरुको प्रदर्शन भने सोचेअनुसार भएन । राष्ट्रिय टिमका ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ सेखले निराश बनाए । विनोद भण्डारी र रोहित पौडेल फ्लप भए ।
शरद भेषवकरको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो । उनले एउटा म्याचमा विष्फोटक ४९ रन बनाए भने अर्का एउटा म्याचमा अन्तिम बलमा छक्का हान्दै आफ्नो टिमको हार टारे ।
राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन नसकेका भिम सार्की यो आइपीएलमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली ब्याट्यम्सान हुन् । यस्तै लामो समयदेखि राष्ट्रिय टिमबाट आफ्नो स्थान गुमाएका प्रदीप ऐरील पनि फर्म भेट्टाएका छन् ।
यो संस्करणमा शाहिद अफ्रिदी, मोहम्मद शहाजाद, उपुल थरंगा, तमिम इकबल, रिचार्ड लेभी, सान्दुन भिराकोडी, साहान अराचिगे, केसरिक विल्यम्स जस्ता विश्व प्रख्यात विदेशी खेलाडीहरूको उपस्थिति थियो । सर्वाधिक रन बनाउने पाँच खेलाडीमध्ये चार खेलाडी विदेशी नै छन् ।
बलिङतर्फ भने नेपाली बलरहरुकै बाहुल्य रह्यो । धेरै टिमहरूले विदेशी बलर हायर गरेका पनि थिएनन् । नेपाली टिमका प्रमुख दुई बलर सोमपाल कामी र करण केसीले भने निराश बनाए । सर्वाधिक विकेट लिने पाँच बलरको सूचीमा उनीहरू छैनन् ।
सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीहरू
१. मोहम्मद शहजाद: अफ्गानिस्तानका अनुभवी क्रिकेटर शहजादले चितवन टाइगर्सबाट प्रतियोगिता खेल्दै उपाधि पनि उचाले । उनले ईपीएल चौथो संस्करणमा सर्वाधिक २०७ रन बनाए । शहजादले विराटनगर वारियर्स विरुद्धको पहिलो खेलमा १ रन मात्रै बनाएका थिए ।
दोस्रो खेलमा काठमाडौं किङ्स-११ विरुद्ध १७ रन जोडे । तेस्रो खेलमा पोखरा विरुद्ध ६३ रन बनाएर अविजित रहेका थिए । चौथोमा खेलमा ललितपुर प्याट्रिओट्सविरुद्ध ३५ रन, पाँचौ खेलमा भैरहवाविरुद्ध ३२ रन र क्वालिफायरमा पोखरा विरुद्ध ४८ सँगै फाइनलमा पुन: पोखराविरुद्ध ११ रन जोडे ।
२. भीम सार्की: चितवनलाई च्याम्पियन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भीमले प्रतियोगितामा निकै राम्रो प्रदर्शन गरे । प्रतियोगिताको उदीयमान खेलाडीसमेत घोषित भएका भीमले ईपीएलमा यो वर्ष दोस्रो सर्वाधिक १९६ रन बनाए । उनले पहिलो खेलमा विराटनगरविरुद्ध ३० रन, दोस्रो खेलमा काठमाडौंविरुद्ध ६, तेस्रोमा पोखराविरुद्ध ५४, चौथोमा ललितपुरविरुद्ध २७, पाँचौमा भैरहवाविरुद्ध १६, र फाइनलमा पोखराविरुद्ध ६३ रन बनाए । प्रतियोगितामा दुई अद्र्धसतक बनाउने नेपाली ब्याट्सम्यान उनी मात्रै हुन् ।
३. उपुल थरंगा: श्रीलंकन क्रिकेटर थरंगा भैरहवा ग्लाडिएटर्सबाट खेलेका थिए । उनले ईपीएलमा १ सय ८५ रन बनाउँदै प्रतियोगितामा तेस्रो सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बने । भैरहवाले पहिलो खेल पोखराविरुद्ध खेलेको थियो जुन खेल १० ओभरमा पनि परेका कारण स्थगित भएको थियो र दुवै टोलीले अंक बाँडेका थिए ।
उक्त खेलमा थरंगाले ब्याटिङ गर्ने मौका पाएनन् । दोस्रो खेलमा विराटनगरविरुद्ध ३४ रन बनाए । तेस्रो खेलमा ललितपुरविरुद्ध ६७ रन, चौथोमा चितवनविरुद्ध ३९ रन बनाएका थिए । त्यस्तै पाँचौ खेल काठमाडौंविरुद्ध पानी परेकै कारण स्थिगित भएको थियो । र, अंक बाँड्दै इलिमिनेटर खेलेको थियो । इलिमिनेटरमा थरंगाले काठमाडौंविरुद्ध ३५ रन जोडेका थिए । थरंगाले दोस्रो क्वालिफायरमा पोखराविरुद्ध १० रन जोडेका थिए ।
४. रिचार्ड लेभी: दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर लेभीले पोखरा राइनोजबाट ईपीएल खेल्दै प्रतियोगिताको उपविजेता बने । उनले तेस्रो संस्करण पनि पोखराबाटै खेलेका थिए । लेभीले यो सिजन कूल १ सय ८१ रन बनाउँदै प्रतियोगिताको सर्वाधिक रन बनाउने चौथो खेलाडी भएका छन् । लेभी पोखराका लागि भैरहवाविरुद्धको पहिलो खेलमा शून्यमा आउट भएका थिए ।
उनले दोस्रो खेलमा ललितपुरविरुद्ध ३८ रन बनाएका थिए । तेस्रो खेलमा चितवनविरुद्ध २० रन, चौथो खेलमा विराटनगरविरुद्ध ४७ रन, पाँचौ खेलमा काठमाडौंविरुद्ध १७ रन र पहिलो क्वालिफायरमा चितवनविरुद्ध १९ र दोस्रो क्वालिफायरमा भैरहवाविरुद्ध १४ रन बनाए । फाइनलमा चितवनविरुद्ध २६ रन जोडेका थिए ।
५. सान्दुन विराकोडी: श्रीलंकन क्रिकेटर विराकोडीले साविक विजेता ललितपुर प्याटिरओट्सबाट यो संस्करणको ईपीएल खेलेका थिए । उनले प्रतियोगितामा कूल १ सय ६६ रन जोडेर तेस्रो सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी भएका छन् ।
उद्घाटन खेलमा काठमाडौंविरुद्ध २, दोस्रो खेलमा पोखराविरुद्ध १९, तेस्रो खेलमा भैरहवाविरुद्ध ५८, चौथो खेलमा विराटनगरविरुद्ध ७३ रन र पाँचौ खेलमा चितवनविरुद्ध १४ रन जोडेका थिए ।
सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी
१. सागर ढकाल: नेपाल पुलिस क्लबका खेलाडी सागर चितवन टाइगर्सबाट प्रतियोगिता खेल्दै सर्वोत्कृष्टसमेत घोषित भए । उन्ले प्रतियोगितामा सार्वाधिक १४ विकेट लिए । विराटनगरसँगको पहिलो खेलमा सागरले २ विकेट लिएका थिए । दोस्रो खेलमा काठमाडौंविरुद्ध ४ विकेट, तेस्रो खेलमा पोखराविरुद्ध बिना विकेट रहेका सागरले चौथो खेलमा ललितपिुर विरुद्ध २, पाँचौ खेलमा भैरहवाविरुद्ध १ र क्वालिफायरमा पोखराविरुद्ध ४ विकेट लिए ।
२. कमल ऐरी: चितवन टाइगर्सबाट बलिङ–ब्याटिङ् दुवैमा राम्रो प्रदर्शन गरि रहेका कमल प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने दोस्रो खेलाडी बने । उन्ले कुल १२ विकेट लिए । पहिलो खेलमा विराटनगरविरुद्ध २ विकेट लिएका कमलले दोस्रो खेलमा काठमाडौंविरुद्ध १ विकेट लिए । तेस्रो खेलमा पोखराविरुद्ध २ विकेट, चौथो खेलमा ललितपुरविरुद्ध ३ विकेट लिए । पाँचौ खेलमा भैरहवाविरुद्ध र क्वापलफायरमा पोखरा विरुद्ध विकेटविहीन रहे । तर, फाइनलमा कमलले पोखराविरुद्ध चार विकेट लिएका थिए ।
३. करिम जनत: अफ्गानी क्रिकेटर करिम चितवन टाइगर्सबाट ईपीएल खेल्दै कुल ११ विकेट लिए । सर्वाधिक विकेट लिने तेस्रो खेलाडी बनेका करिमले पहिलो खेलमा विराटनगरविरुद्ध २, दोस्रो खेलमा काठमाडौंविरुद्ध २ विकेट लिएका थिए । यस्तै, तेस्रो खेलमा पोखराविरुद्ध विना विकेट रहेका जनतले चौथो खेलमा ललितपुर विरुद्ध २, पाँचौ खेलमा भैरहवा विरुद्ध २ र क्वालिफायरमा पोखराविरुद्ध १ विकेट लिएका थिए । फाइनलमा पोखराविरुद्ध भने करिम विकेट लिन असफल रहेका थिए ।
४. जितेन्द्र मुखिया: काठमाडौं किङ्स–११ बाट ईपीएल खेलेका जितेन्द्र कुल ९ विकेट लिँदै प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने चौथो खेलाडी बने । उन्ले ललितपुर विरुद्धको उद्घाटन खेलमा ४ विकेट लिएका थिए । दोस्रो खेलमा चितवनविरुद्ध २ विकेट, तेस्रो खेलमा विराटनगरविरुद्ध शून्य, चौथो खेलमा पोखराविरुद्ध २ विकेट लिएका थिए । भैरहवा विरुद्धको पाँचौ खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको थियो । र, जितेन्द्रले इलिमिनेटरमा भैरहव विरुद्ध १ विकेट लिए ।
५. नन्दन यादव: पोखरा राइनोटबाट चोथो संस्करण खेलेका नन्दन यादवले प्रतियोगितामा ९ विकेट लिए । भैरहवाविरुद्धको पहिलो खेल वर्षाले प्रभावित बन्दा उनले बलिङको अवसर पाएनन् । दोस्रो खेलमा ललितपुरविरुद्ध ३ विकेट लिएका नन्दनले चितवनविरुद्धको दोस्रो खेलमा सफलता हात पारेनन् । तेस्रो खेलमा विराटनगर, चौथो खेलमा काठमाडौं, पाँचौँ खेलमा चितवन र छैठौ खेलमा भैरहवाविरुद्ध १/१ विकेट लिएका नन्दनले फाइनलमा पोखराविरुद्ध २ विकेट लिएका थिए ।
#एभरेष्ट प्रिमियर लिग
प्रकाशित: २०७८ असोज २४ गते २०:१९
पंकजलाई रुचाएका गणेश थापाले नवीन पाण्डेको नियुक्तिमा किन आपत्ति जनाए ?
एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेम्वाङलाई एएफसी अध्यक्षको बधाई
हङकङलाई पराजित गर्दै मलेसिया एसीसी महिला टी- २० च्याम्पियनसिपको फाइनलमा
विश्वकप २०२२ मा टीममा २६ खेलाडी राख्न फिफाले दियाे अनुमति
वर्षा बाधक बन्दा नेपालकाे एसिया कप खेल्ने सपना अधुरै, युएई फाइनलमा
अस्मिनाको उत्कृष्ट बलिङ, नेपाललाई युएईले दियाे ८२ रनको लक्ष्य
यूएईविरुद्ध नेपाल टस जितेर फिल्डिङ गर्दै